Nezvedu - Suzhou KUZVIDZIDZISWA Maindasitiri Uye Trade Co, Ltd.
Suzhou MENTIONBORN Maindasitiri Uye Trade Co., Ltd.
Suzhou MENTIONBORN Maindasitiri uye Kutengesa Co, Ltd. iri muNha. 18, East Chenghu Road, Wuzhong Dunhu, Suzhou, China. Isu takasarudzika mune zvekupfeka / zvekupfeka / zvekupfeka uye zvekupfeka. Mitsetse yedu inovhara hometextiles zvakare. Isu takatarisana nevatengi uye tinoramba tichigadzira mamwe maitiro evashandisi vekupedzisira. Nepo zvigadzirwa zvedu zvikuru zvave zvichinyatso kuendesa kunze kuEurope, America neAustralia mumakumi emakore apfuura, kutengesa kwedu mumusika wepamba zvakare kwakakura zvakanyanya mumakore apfuura.
Suzhou YAKATAURWA inosanganisira R & D, kugadzirwa, kutakura uye kushambadzira nezvimwe, zvinoitwa nechikwata chehunyanzvi, chinoshanda, chine mukurumbira uye chakavimbika. Isu takanakira kutyora dhizaini dhizaini, pfungwa yekupokana uye fungidziro yekuti machira epamba uye mbatya dzemitambo hazvina chekuita nemafashoni. Nehunyanzvi hwekugadzira, isu takazvipira kukurudzira vanhu kudzika rudo uye chishuwo chemumba machira nemitambo. Zvipira kune yakasanganiswa musanganiswa wenyaradzo uye dhizaini uye chinja vanhu mararamiro. Mumakore achangopfuura, zvakatipoteredza-zvishandiswazve zvigadzirwa zvakare ndizvo zvedu zvikuru zvigadzirwa zvekuvandudza. Kugadzira ndiko kugara kwedu kutenda. Dhipatimendi redu reR & D rinowanikwa muSuzhou, padyo neShanghai, uye rinoramba richitora zvinodzokerwa kubva kumuganhu wemusika, zvichisimbisa vashandisi vekupedzisira 'nekupa vatengi vedu zvigadzirwa zvinodhura.
Muchokwadi, zvigadzirwa zvitsva zveSuzhou MENTIONBORN zvinosanduka kuve kukunda kwevanhuwo zvavo. Nekuti zvigadzirwa zvedu zvese zvakagadzirwa zvakasarudzika kuti zvinokwana mumwe nemumwe, uye zvakanyanya kukosha, zvinoramba zvichikwanisika nguva dzese.
Paunenge iwe wawana izvo zvakafanira zvigadzirwa, inova yako chaiyo sosi yemufaro!
Chirevo chedu: KUTAURWA-KUZVARIRWA KUTI UFARE!
yemubatanidzwa tsika nemagariro
kupayona uye hunyanzvi
Ticharamba tichitarisa pane yakakosha pfungwa yehutano, nyaradzo uye runako,
ramba uchizadzisa zvinodiwa nevatengi, zvichitungamira kuvandudzwa kwemaindasitiri.
Mharidzo Kugadziriswa Uye Kugadzira, Varume Vanokurumidza-Kuomesa Vakarukwa Mapfupi, Kukurumidza-Kuomesa Sports Shorts, Yakapetwa-Yakatenderedzwa Flannel Blanket, Bhachi reMitambo, Varume Vakasarudzika Sports Bhurugwa,